kudzidziswa » Noticias » Dzivirira zvimiti zvakachengetwa kuti zvisanyangarika paWhatsApp
Mukurumbira wakawanikwa neWhatsApp mumakore achangopfuura unoshamisa, tichifunga kuti ndiyo inonyanya kushandiswa meseji app munyika zhinji pasi rose.
Asi kuti unzwisise mukurumbira wayo wepamusoro, zvinodikanwa kuti utaure kuti ndiyo inonyanya kushandiswa nekuda kweiyo nyore interface, nyore kushandisa, huwandu hukuru hwemabasa ainopa uye nekugadziridza nguva dzose.
Zvakadaro, WhatsApp haisi benzi. Chokwadi, parizvino hapana application yenharembozha iyo yakakwana.
Izvi hazvireve kuti chishandiso chine kukanganisa kukuru kana matambudziko anogumbura anokanganisa ruzivo rwemushandisi kana chengetedzo, asi inogona kunge iine chikanganiso mune dzimwe shanduro dzinozogadziriswa mune inotevera.
Kunyangwe kune rimwe divi isu tichiwana maapplication akaita seTeregiramu anopa kuyerera kwakanyanya mukutaura, ivo vanopa mashoma WhatsApp mabasa, zvinoreva kuti iwo mavhezheni ekumashure uye kuti anoasanganisa gare gare kupfuura Facebook mutumwa.
Asi ngatidzokere kumatambudziko anogona kuwanikwa neWhatsApp: kune vamwe vashandisi inogona kunge isingakoshi, asi kune vamwe inotsamwisa. Isu tinotaura nezvezvinamira zvinochengetwa nevashandisi zvobva zvanyangarika, zvinoreva kuti zvinofanirwa kutsvagwa nekuchengetwa zvakare.
Iwo anonamirwa anonyangarika muWhatsApp
WhatsApp yakawedzera mukurumbira payakabatanidza basa rekunamira. Pasina kupokana, yaive kopi yekusanyara yeizvo mamwe maapplication akaita seTeregiramu neMutsetse anga atove kuita. Asi mushure mezvose, ndizvo zvinoitwa nemapuratifomu ese. Pavanoona kuti chimwe chinhu chinofarirwa nemakwikwi, vanochikopa.
Mazuva ano, ichokwadi kuti zvimiti zveWhatsApp zvinoshandiswa zvakanyanya uye kuti vari pano kuti vagare muapp kwenguva yakareba.
Nekudaro, dambudziko riri pano nderekuti kushanda kwezvinamira hakuna kunyatso shanda, kunyanya nezve nzira iyo mabatirwo anotorwa uye nekuverenga zviziviso zvakafanana.
Dzimwe nguva, vanhu vazhinji vanosarudza kutendeukira kune wechitatu-bato maapuro kuti vatore nemazvo zvimiti, izvo zvinobatsira kuchengeta, kuronga uye kuawana.
Apa ndipo panokonzereswa kutsakatika kwemanamira muWhatsApp. Izvo zvinokonzera kushamisika uye kutsamwa muvashandisi.
Sezvineiwo, tinogona kushandisa mhinduro iri nyore kudzivirira izvi kuti zvisaitike.
Kazhinji, kudzima zvimiti kunoitika pamafoni ane bhatiri sarudzo yakavhurwa. Mamwe mafoni eAroid ane mashandiro aya anoshandiswa kuseta muganho pane zviito zvemaapplication anoshandisa yakakwira bhatiri, senge WhatsApp, Facebook nezvimwe zvakadaro, kuvharira mabasa ekumashure uye, nekudaro, kumisa kudyidzana nemaapplication anoenderana neizvi. .
Nzira yekudzivirira sei kuti zvimiti zvirege kudzimwa?
Kubva pafoni yako yeAroid, enda kuSettings uye tsvaga uchishandisa iyo yemukati yekutsvaga injini. Iwe unofanirwa kuwana iyo "Battery optimization" basa.
Kana wangopinda, tinya pakanzi "Hapana mvumo" uyezve "All application". Mapurogiramu ese akaiswa anozonyorwa.
Tsvaga mune iyi rondedzero yechipiri application yaunoshandisa kuwedzera zvimapa paWhatsApp. Tinya pane iyi app.
Pakarepo hwindo rinovhurwa iro rinokubvunza iwe kana iwe uchida kubvumidza iyo stickers app kushandisa ese anodiwa zviwanikwa zvefoni kana iwe uchida kudzikamisa mashandisiro kuitira kuti bhatiri rigare kwenguva refu.
Sarudza iyo "Bvumira" sarudzo, saka iyi inonamirwa app inoshandisa iyo yakanyanya kugona yechishandiso.
Nekudaro, iwe unenge watogadzira iyo inonamirwa app yeWhatsApp pakuita kwakanyanya, iyo yauchange uchidzivirira nayo foni (kuchengetedza bhatiri) kubva pakudzima zvimiti zvaunochengeta.
WhatsApp inosvitsa iyo inonyanya kukumbirwa ficha yemapoka mumeseji application
Zolgensma inoshandiswa sei, mushonga unodhura zvakanyanya pasi rose, unokosha pamadhora mamiriyoni matanhatu nemazana mashanu?
YouTube Gaming inozivisa kudyidzana nestreamer Nobru
Kuratidzwa kwekusvibiswa ndicho chikonzero che10% yekenza dzekenza muEurope
CHEAP SAMSUNG | Galaxy A52 inoenderera mberi kutengeswa necouponi muMagazini Luiza